I-Windows Live Writer 2011 - Geofumadas
I-Windows Live Writer 2011
Kuzo izixhobo ezingcono kakhulu ezikhoyo ukulawulwa kwe-blogs ngaphandle kokungaxhunyiwe kwi-intanethi. Into ethile yafumana ukugxeka okulungileyo geek xa esithi: "emangalisayo, kwaye ivela kwiMicrosoft"
Uhlobo lwe-2011 lwe-Live Writer luhluke kwi-predecessor yalo ngokubhekiselele kwintsebenziswano, nangona i-functionalities ifana nokunye ukuphucula.
Ukungqubana ne-inshorensi yokuqala ekuqaleni kwabo bawasebenzisa inguqu yangaphambili, kuba izisa irayibhoni (ibhondi) kwisitayela se-Office 2007. Kodwa ngezinye iinkqubo unokufumana kwakhona ukusebenza okubonakala ngathi kufihliwe okanye okuhlukileyo, njengale:
Ukukhethwa kweeblogi, ekhompyutheni lephepha eliphambili.
Ukunyangwa kwemifanekiso, ekhoyo ngoku izisa iinketho ezininzi, kodwa ngenxa yokuba ibha engqambileyo, iphazamisa encinane. Mhlawumbi ndiza kuyifumana kamva, kodwa andiyikuyibona inketho yokongeza isiphumo esingagqibekanga seblogi kumfanekiso.
Isiqhelo sokuvula iifayile ezipapashiweyo, ezisekhompini yecala ekhoneni, e-Office ngokuqhelekileyo isetyhula. Kodwa nakwiphepha eliphezulu ungasebenzisa iinkqubo eziqhelekileyo ezifana nokulondoloza, ukungena entsha kunye nokujonga kuqala.
Into ecasulayo kukufakelwa kwama-hyperlink, okongeza igalelo http:// Ndifumana eyinqaba, ngenxa yokuba akukho mntu Digita oku ngesandla, ngokuqhelekileyo okubangwa nge khuphela / cola evela ibrawuza abanye ngokungxama ikhonkco iza kuhamba alinamali.
Kungenzeka ukuba iRibhoni ibangela ukungathandeki xa izixhobo ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwiifayile. Kodwa oko kuxazululwa ngeqhosha lasekunene le mouse, kwaye ukhetha ukhetho lokuthumela kwi-tape yokufikelela ngokukhawuleza; uze uginye umkhwa ngenxa yokuba awunakuphelelwa.
Yintoni eyenza ihluke kwaye ibe ngcono
Usebenza kuphela kwi-Windows 7, mhlawumbi ihlelelekile kulabo banethemba lokuba bahlale bexakeka ixesha kwi XP. Kodwa ukuba siyayidelela loo khanyiso, ubuchule beWindows 7 buyenza ngokukhawuleza, unokuqonda.
intsebenziswano kufuneka ukuba yaphando amaqonga ezixhasa RSD (lweQela oluLula Kakhulu Discoverabilit) ngoko liphuma ngokukhawuleza kakhulu kule kwinguqulelo yangaphambili bengekafiki yokuwa ukuba uxhulumaniso wayengekho ngokukhawuleza kakhulu okanye kabini isithuba.
Ngoku akukho mingcele ekungeneni xa uvula inqaku elipapashwe. Ngaphambili Ndandisekela kuphela i-500, ngoku unako ukukhetha kwi-1000, i-3000 kunye nelandelayo "kuzo zonke". Inceba yokuba kule ngxenye ayinakho ukuphuculwa kwintsebenziswano yewebhu, kuba endaweni yokujonga ngokuthe ngqo isondlo sesitayela sewebhu, iqokelela ukuze ikhangele kuyo.
Kufuneka ubone okokuthi "susa" ukhetho olukhoyo, olukhoyo kwipaneli yophendlo lokungena. Andiyikuzama ukuzama, kuba ukuba oko kuphelisa ukungena kwi-intanethi, kuyingozi kakhulu ukuba khona; Ndifumana ingcamango yokuba kuphela ithikithi lendawo.
Iyancintisana kakhulu ekuqwalaseleni umphathi weblogi, kodwa isenokuba neengxaki zokumisela itemplate njengoko yenzayo ngeBlogger.
Ukufakela kufuna ezinye iilayibrari ze-Live Escentials, umsi othakazelisayo we-Windows 7 ongaphezulu kweyona nto yangaphambili yeWindows Installer. Ingakumbi andizange ndithole utshintsho olunzima, mhlawumbi ngenxa yokuba ndivuyayo ukuba ndingabuyeli kwi-XP emva kweveki ephelileyo ndagqiba ukufometha ikhompyutheni yam kwaye ndiqhubele kwi-Windows 7, utshintsho olubonisa izinto ezininzi, ukusuka kwintlanganiso yokuqala nePaint ukuya kumandla apho i-GIS ye-Manifold isebenza khona.
Ekugqibeleni, uMlobi oPhilileyo usengcono kakhulu kubahleli beWYSIWYG kwiiblogi. Nangona singalindela ukuba iMicrosoft ayiyikunyamekela ukuphuculwa kwayo kuba nangona ikhululekile, kukho umthombo ovulekileyo okanye amanyathelo angasese angasetyenziswa ngokusebenza okukhulu iinqwelo okanye i-multiplatform.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngakumbi iGoogle +
Post Next Vula ezininzi iifayile kml kwiGoogle MapsOkulandelayo "